Chọpụta ihe ndị ahịa na-ekwu maka gị
Lithium Ahịa Intelligence Center: Site Ahịa ka Superfans
Thursday, July 26, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
N’ụwa nke ugbu a gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ihe ndị ahịa na-ekwu banyere ika ahụ na-eme ka ihe na-aga aga karịa mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ ọdịnaya akwụ ụgwọ nwere ike ịnapụta. Ọ bụghị ihe ijuanya na ndị na-ere ahịa na-ewepụ ntị ha ka ha nwalee ma ghọta ihe onye ahịa na-ekwu banyere akara ahụ na ngalaba mmekọrịta ya. LithiumEzigbo oge nyocha ihe eji elekọta mmadụ na - enyere ndị ahịa aka ige ntị, tụọ ma soro ụda olu onye ahịa.
Hilọ Ọrụ ọgụgụ isi nke ndị ahịa Lithium na-enye gị ngwaọrụ iji nyochaa ọrụ mmekọrịta ma mepụta mmekọrịta miri emi nke ndị ahịa n'ofe Lithium Communities, Facebook, Twitter, na ọtụtụ nde saịtị na ntanetị niile. Anyị jikọtara obodo nchịkọta, elekọta mmadụ mgbasa ozi nchịkọta, na mgbasa ozi mgbasa ozi na-arụ ọrụ n'ime otu, njikọta ọnụ iji mee ka ọ dị mfe ịga site na nghọta iji mee ihe.
Na isi ihe nlekota ihe nlekota nke ndi mmadu nke Lithium bu dashboard. Mgbe onye ọrụ jiri akara aha ma ọ bụ isiokwu okwu ọ bụla mepụta ọchụchọ, Lithium na-enyocha netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche wee mejupụta dashboard na ndepụta nke ederede ma ọ bụ nkwupụta ebe achọtara isiokwu ahụ. The dashboard na-enyekwa eserese metụtara nchịkọta na nsonaazụ. Injin ahụ na-enweta data data oge niile na data akụkọ ihe mere eme wee kpuchie blọọgụ nde 100, saịtị ntanetị na vidiyo, saịtị akụkọ akụkọ na ọgbakọ na-abụghị nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze dị ka Facebook na Twitter.
Site na data nchọta, igwe Lithium na-ewepụta mkpụrụokwu dịka chọrọ, chọrọ, hụrụ n'anya n'anya, na kpọrọ asị iji soro mmetụta na akpaghị aka. Onye na-ere ahia nwere ike itinye ọrụ mmadụ na-arụ iji mezuo nsonaazụ mmetụta dị otú ahụ. Enwekwara mmetụta nke na-enye onye ọrụ ohere ịmata ndị na-eso ụzọ ya na ndị na-eso ụzọ nwere mmetụta dị ukwuu n'obodo, na-enye gị ohere ịghọta onye onye ahịa ahụ bụ na ihe ọ ga-abụ mgbe ị kpebiri okwu a ma ọ bụ kwuo maka nzaghachi ahụ ha ga-enwe ekele ma gbasaa okwu ahụ.
Ọbụna nlele anya nke dashboard ga-eme ka onye na-ere ahịa ghọta echiche zuru ezu nke ndị ahịa. Ọmụmụ ihe zuru ezu ga-ekwe ka ahịa ahụ ọ bụghị naanị ime ihe kwesịrị ekwesị iji mee ka onye ahịa ahụ ka mma ma debe aha ya kamakwa chọpụta nsogbu ọ bụla na-azụ ahịa. Iji maa atụ, echiche na-adịghị mma sitere n'otu mpaghara ala nwere ike bụrụ ihe na-akpali maka ịchọ mkpụrụ obi, nke nwere ike mechaa chọpụta nsogbu ahụ na nnyefe adịghị mma!
Iji Lithium Ahịa ọgụgụ isi, ị nwere ike:
Meziwanye arụmọrụ nke mmemme mmekọrịta: Mee ka ndị ọgbọ na-eme enyi na ndị enyi ma hụ na ihe kacha mma na-aza ozugbo na mgbasa ozi mgbasa ozi
Chọpụta ma zụlite Ndị Na-emetụta Ya: Gbanwee ndị na-agba ume ka ha bụrụ ndị gbakwunye ahịa gị, ahịa gị na ndị otu nkwado gị
Ghọọ ebe etiti nke nghọta mmadụ: Debe mkpịsị aka gị na isiokwu nke isiokwu dị ọkụ, nghọta dị iche iche, na mmemme ndị asọmpi
Ulo oru nke Lithium kariri nlekota ndi mmadu. Inye nri na akara aka nke onye asọmpi dị ka isiokwu na-eme ka ndị na-ere ahịa ghọta etu ndị ahịa na ndị obodo ha si metụta ndị asọmpi gị! Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọghị iji ikpo okwu ha, hụ na ị ga-enyocha ha ego di egwu na mgbasa ozi, mmetụta, ọgụgụ isi ndị ahịa, wdg.
Gold Rush maka Top Ọkwa ngalaba
Nkà nke Mobile Check-In